कर्मयोग र जीवनको सार्थकता | चितवन पोष्ट दैनिक
कर्मयोग र जीवनको सार्थकता
२०७० फाल्गुन २५, आईतवार ०२:२७ गते
भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कर्मयोगको सापेक्षमा ज्ञानयोेग ठूलो हुन्छ भनेर जब बताउनुभयो, त्यसपछि अर्जुनले प्रश्न गरे, ‘हे जनार्दन, यदि कर्मभन्दा ज्ञान ठूलो हो भने तपाईँले किन मलाई यस्तो भयङ्कर कर्ममा लगाउनुहुन्छ ? मेरा आँखाअगाडि थुप्रैथुप्रै इष्टमित्र र भाइबन्धुहरु छन् । यिनीहरुसँग लडेर यिनलाई मारेर शासन गर्ने तुच्छ काममा मलाई किन प्रेरित गर्नुहुन्छ ?’ उनी अगाडि भन्दछन्, ‘मलाई हजुरले मोहनी बचनका माध्यमले मेरो बुद्धिलाई पनि मोहित गरिदिनुभएको छजस्तो लागेको छ । यसर्थ, त्यो एउटा कुरा मलाई निश्चयका साथ बताउनुस्, जसले मेरो कल्याण होओस्, मैले कल्याण प्राप्त गर्न सकूँ ।’
अर्जुनका यी प्रश्नका जवाफ दिँदै भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, ‘हेर अर्जुन, मैले तिमीलाई दुई प्रकारका निष्ठा अर्थात् साधनको परिपक्व अवस्थाका बारेमा पहिले नै बताएको थिएँ, जसमध्ये साङ्ख्ययोगीको साधनको परिपक्व अवस्था ज्ञानयोगबाट सम्भव हुन्छ भने योगीको साधनको परिपक्व अवस्था कर्मयोगबाट सम्भव हुन्छ । मनुष्य न त कर्म आरम्भ नगरी निष्कर्मतालाई प्राप्त गर्न सक्दछ, न त कर्मको त्यागले मात्रै सिद्धि आर्जन गर्न सक्दछ ।’
कर्मको मह¤व वर्णन गर्दै भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ ः
‘न हि कश्चित्क्षणमपि
जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म
सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।।’
अर्थात्, निश्चित रुपमा मानिस कुनै पनि समय एकछिन पनि काम नगरी बस्दैन, किनकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक रूपमा नै कर्म गर्नका लागि बाध्य हुन्छ । भगवान् श्रीकृष्णको यो भनाइले कर्मको अनिवार्यता स्पष्ट पारेको छ । कर्म हाम्रो अपरिहार्यता हो र जीवनको कुनै पनि क्षण कर्तव्यले खाली छैन भन्ने सिसेरोको भनाइ पनि यही गीता–दर्शनको अभिव्यक्ति हो । हाम्रो शरीरले नै हाम्रो कर्मको विधानलाई प्रतिक्षण बताइरहेको छ । हामीले प्रतिक्षण सास फेरिरहेका हुन्छौँ । हाम्रो मुटु धड्किइरहेको हुन्छ । शरीरका अङ्गप्रत्यङ्गले लगातार काम गरिरहेका हुन्छन् ।
कर्म तिनले गर्दैनन्, जो मृत छन् । जडवस्तुलाई कर्मको विधानले छुँदैन तर जोसँग जीवन छ, उनीहरु भने कर्मको विधानबाट अलग रहन सक्दैनन् । यदि कसैले म काम नगरीकन बाँच्न सक्छु भनेर भन्दछ भने त्यो उसको अप्राकृतिक कदमसिवाय केही हुँदैन । हामीकहाँ कतिपय मानिसहरु ध्यान वा साधनाका नाममा शरीरलाई जबर्जस्ती रोक्ने हठ गर्दछन् । वास्तवमा ती हठी हुन् । श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, ‘जो मूर्ख मनुष्य आफ्ना समस्त कर्मेन्द्रियहरुलाई हठपूर्वक माथिबाट रोकेर मनमनै भने तिनै इन्द्रियका भोग्य विषयहरुको चिन्तन गर्दछ, ऊ मिथ्याचारी, दम्भी र ढोँगी हो ।’ अर्थात्, मानिस कर्मयोगका माध्यमले पनि ध्यान र साधनको मार्गमा अघि बढ्न सक्दछ, उसलाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन । मनको शान्ति नै सबैभन्दा ठूलो शान्ति हो । साधनाका नाममा शरीरलाई कष्ट दिँदैमा मुक्ति र सिद्धि हुँदैन । बाहिर–बाहिर हठयोगको साधना गर्ने, तर भित्रभित्रै वासना र भोगको चिन्तनमा चित्तलाई केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति कर्महीनहरुको हो । त्यसैले, जीवनमा कर्मयोगको उच्च मह¤व छ भनेर गीताले भनेको छ । कर्म नै सबैभन्दा ठूलो साधना हो । आपूmले गर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट जो परपर हुन खोज्दछ, ऊ कहिल्यै पनि सच्चा साधक हुन सक्दैन । त्यसैले, कर्मलाई त्यागेर होइन, सम्पन्न गरेर नै हामी जीवन–साधनाको परिपक्व यात्रामा सामेल हुन सक्दछौँ ।
यस सन्दर्भमा हामीले विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने हामीले कर्म गर्दा हाम्रा इन्द्रियहरुमाथि संयम कायम गरेर गर्न सक्नुपर्दछ । श्रीकृष्णले भन्नु पनि भएको छ गीतामा ः
स विशिष्यते ।।’
तर हे अर्जुन, जो पुरूष मनद्वारा इन्द्रियहरुलाई व्यवस्थित एवम् संयमित तुल्याएर अनासक्त भावले समस्त इन्द्रियद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ, त्यो नै श्रेष्ठ कर्मयोगी हो । हामीले शरीरका इन्द्रियहरुको परिचालन गरेर नै कर्महरु सम्पन्न गर्ने गर्दछौँ । त्यसरी कर्म गर्दा हाम्रा इन्द्रियहरु विभिन्न विषय र सामग्रीहरुतिर आकर्षित हुन सक्दछन् । त्यतिखेर हामीभित्र काम र त्यसको फलप्रति आसक्ति अर्थात् मोह पनि पैदा हुन सक्दछ । त्यस्तो अवस्थामा हामी सचेत बन्न सक्नुपर्दछ । कर्म गर्दै जाँदा प्राप्त परिणामप्रति न हामीमा हर्ष होस्, न हामीमा शोक नै होस् । हामीले ती सबै कर्मका परिणामहरुलाई हाँसीहाँसी स्वीकार्न सकौँ । यही नै हामी कर्मयोगी हुनुको प्रमाण हो ।
गफ गरेर मात्रै हुँदैन, काम नगरी हुँदैन । बिनाकाम हातमुख जोर्ने कुरा पनि सम्भव हुँदैन । कर्महीनता नै भोकमरी र अनिकालको कारण पनि हो । जहाँ आलस्य हुन्छ, त्यहाँ मानवता नै रहँदैन । आलस्य समस्त असफलता र अराजकताको मूल पनि हो । अकर्मण्यता हाम्रो रोग र शोकको पनि उद्गम हो । त्यसैले, अर्जनुलाई सम्झाउँदै श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ ः
‘नियतं कुरू कर्म त्वं
कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते
न प्रसिद्धयेदकर्मण ः ।।’
अर्थात्, तिमीले शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म गर, किनकि कर्महीन हुनुभन्दा कर्म गर्ने कुरा श्रेष्ठ हो र कर्म नगर्दा शरीर निर्वाह गर्ने काम पनि सम्भव हुँदैन । कर्मलाई गीताले जीवनको सबैभन्दा सर्वोच्च मूल्य प्रदान गरेको छ । हरेक कामहरु कर्मबाटै आरम्भ हुन्छन् । कर्म त गर्ने तर कस्तो कर्म ? शास्त्रविहित कर्म । शास्त्रविहित कर्म भनेको शास्त्र, धर्मग्रन्थ, सामाजिक मूल्य, नियमकानुन र आदर्शहरुले निर्देश गरेको कर्म भनेर भन्न खोजिएको हो ।
हामीले कर्म त गर्नुपर्दछ तर जे पायो, त्यही कर्म भने गर्नुहुँदैन । जुन कर्म हामीलाई गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ, जुन कर्म गर्दा शरीर र मनलाई सास्ती हुँदैन, जुन कर्म गर्दा सामाजिक मर्यादा र आदर्श कायम रहन्छ र जुन कर्म गर्दा शास्त्रीय मूल्य र धर्म पनि कायम रहन्छ, त्यस्तो किसिमको काम गर्नुपर्दछ भनेर गीताले बताएको छ । हामीले गर्ने सबै कामहरु मर्यादित र सभ्य हुँदैनन् । असभ्य, अस्वस्थ र अमर्यादित कर्महरुले हामीलाई दुःख र अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्दछन् । शास्त्रले निर्देश गरेका कर्महरु हाम्रो जीवनका लागि आवश्यक र मह¤वपूर्ण हुन्छन् । तिनले उचित ठानेका कर्महरु हाम्रो जीवनको प्रत्यक्ष आवश्यकता र कल्याणसँग गाँसिएका हुन्छन् । त्यसो भएका हुनाले हामीले शास्त्रविहित कर्म गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको हो ।
योग र साधनाको बाटोमा लागेका कतिपयले कर्म गर्दा त्यसको बन्धनमा परिन्छ भन्ने ठानेर कर्मबाट पन्छिने र कर्महीन जीवन बाँच्ने दुश्चेष्टा गर्दछन्, तर त्यो पनि अप्राकृतिक विधि हो । कर्मलाई पनि हामीले यज्ञसँग जोडेर सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने त्यो सुनमा सुगन्धजस्तै हुन्छ । कर्म गर्दैमा कोही पनि मानिस कर्मको बन्धनमा बाँधिदैन, तर त्यसका लागि पुण्यमा आधारित कर्म गर्नुपर्दछ । यज्ञका लागि बाहेक भोग र रागमा आधारित कर्मले मनुष्यलाई बाँध्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हे अर्जुन, तिमी आकाङ्क्षा र आसक्तिरहित भएर पवित्र यज्ञका लागि आफ्नो कर्म कर्तव्य सम्झेर गर भनेर अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ ।
हामीले यज्ञकर्महरु गर्दा सम्पूर्ण जगत्ले पुण्यको अनुभूति गर्दछ । यज्ञ त्यस्तो कर्म हो, जसले सबैको कल्याण गर्दछ । मनुष्य, देवता, पितृलोक, अन्तरिक्ष, वनस्पति, कीटपतङ्गसहित या चराचर जगत्को हित गर्नु र प्रकृतिमा सन्तुलन बनाई राख्नु यज्ञकर्महरुको उद्देश्य हो । यसैले, यस्तो सर्वाङ्गीण हितको कर्तव्य समेटिएको यज्ञबाट हामी कोही पनि भाग्नुहुँदैन भनेर गीताले सम्झाएको छ ।
हामीले यज्ञहरु सम्पन्न गर्दा नचिताएका वा इच्छा नगरेका फलहरु पनि प्राप्त गर्दछौँ । त्यसरी, यज्ञकर्मबाट प्राप्त फललाई देवताहरुलाई समर्पण गरेर बल्ल हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ । अन्यथा, त्यसरी यज्ञबाट प्राप्त फल देवताहरुलाई नचढाई स्वयम् भोग गर्दछ, ऊ चोरबराबर हुन्छ भनेर पनि गीतामा उल्लेख गरिएको छ । यज्ञ भनेका हाम्रा कर्महरु हुन्, पवित्र प्रयत्न र दायित्वहरु हुन् । हामीले जे–जति कर्मयज्ञहरु गर्दछौँ, ती सबैबाट हामीलाई केही नै केही फल अवश्य मिल्दछ । त्यसरी, पाइएको फल हामीले समाजसेवा, परोपकार, कल्याण र परमार्थको काममा लगानी गर्नुपर्दछ । यही नै देवतालाई चढाउनु हो ।
परमार्थ र पुण्य गरिसकेपछि बचेको फल भोग गर्ने व्यक्ति समस्त पापहरुबाट मुक्त हुन्छ भनेर समेत भनिएको छ । अन्न हाम्रो सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । सम्पूर्ण प्राणीहरु अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन् । अन्नको उत्पत्ति वर्षाबाट हुन्छ भने त्यो वर्षा यज्ञका माध्यमले हुन्छ । यज्ञ शास्त्रविहित कर्मबाट उत्पन्न हुन्छन् भने ती कर्मसमुदाय वेदबाट उत्पन्न हुन्छन् । र, वेद अविनाशी परमात्माबाट उत्पन्न भएको मानिएको छ । यसप्रकार परमात्मा सदैव यज्ञमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ ।
भगवान् श्रीकृष्ण अगाडि बताउनुहुन्छ ः अर्जुन, जो पुरूष यो लोकमा वैदिक परम्पराद्वारा प्रचलित सृष्टिचक्रअनुसार व्यवहार गर्दैन अथवा आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्दैन, ऊ इन्द्रियको दाससिवाय केही होइन । त्यस्तो इन्द्रियको दास भोगपरायण पुरूष पापको आयुले युक्त हुँदै व्यर्थ जीवन बाँच्दछ ।
परमको वा परमार्थको चिन्तन गर्ने मानिसका लागि कुनै कर्मको आवश्यकता पर्दैन, किनकि त्यो दिव्य प्रयत्न आपैmँमा महान् कर्म हो । जो शाश्वत् आत्माको चिन्तनमा निरन्तर रमण गर्दछ, आत्मामा नै तृप्त हुन्छ, आत्मामा नै सन्तुष्ट हुन्छ, उसका लागि कुनै कर्तव्य बाँकी रहँदैन । शाश्वत् मूल्य सबैभन्दा महान् हुन्छ । यसैले, शाश्वत् मूल्यमा आधारित आत्मिक चिन्तन कर्तव्यहरुको पनि कर्तव्य हो ।
अर्जुनले व्यर्थ कर्म गर्नुभन्दा कर्मसर्म छोडेर साधु जीवन जिउनु ठीक हुने खालको आशय व्यक्त गरिरहेका बेलामा भगवान् श्रीकृष्णले राजा जनकको उदाहरण दिएर सम्झाउनुहुन्छ ः
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
जनकलगायतका ज्ञानीजन पनि आसक्तिरहित कर्मद्वारा नै परमसिद्धिलाई प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । यसैले, लोकसङ्ग्रहलाई देख्दादेख्दै पनि कर्म गर्नु नै उत्तम हुन्छ । त्यसैले, तिमीले कर्म गर्नैपर्दछ । राजा जनक प्रसिद्ध जनकपुर नगरका राजा थिए । उनी भोग र योगका साक्षात् मूर्ति थिए । उनी अपार राजसी वैभवका बीचमा रहेर पनि तिनको प्रभावबाट सदैव मुक्त रहे । कुनै पनि राजसी ऐश्वर्यले राजा जनकको सा¤िवकता मैलो हुन सकेन । उनी बोध र प्रज्ञाको यात्राबाट कहिल्यै पनि विचलित भएनन् । प्रशस्त भौतिक सम्पन्नताका बीचमा पनि उनी अनासक्त र असंलग्न रहन सफल भएका थिए । त्यसैले, अनासक्त रहने हो भने अथवा सांसारिक अनुरागबाट पृथक् रहन सक्ने हो भने हामीले जीवनलाई सार्थक र धन्य बनाउँदै कर्मका अनावश्यक बन्धनहरुबाट पनि मुक्त रहन सक्दछौँ ।
त्यसैले, हामी जनकजस्तै भोग्य सांसारिक वैभवका बीचमा पनि ऋषि बन्ने योग्यता राख्दै अरुका लागि पनि अनुकरणीय जीवन बाँच्न सक्दछौँ । श्रेष्ठ मानिसले जे–जस्तो आचरण वा जीवन–व्यवहार गर्दछ, अन्य जनसामान्यले पनि त्यस्तै आचरण गर्दछ । उसले जे–जस्तो प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ, समस्त मनुष्य समुदायले पनि त्यसैअनुसार व्यवहार गर्दछ भन्ने भगवान् श्रीकृष्णको मत छ ।
भगवान् श्रीकृष्णसमेत कर्मबाट अलग रहन सक्नुहुन्न । उहाँले भन्नुभएको छ ः हेर अर्जुन, यो तीनै लोकमा मैले गर्नका लागि बाँकी कुनै पनि काम छैन, मैले गर्नका लागि लायक केही छँदा पनि छैन, तापनि मैले कर्म गरिरहन्छु । न मैले केही पाउन बाँकी वस्तु पाउन नसकेको स्थिति नै छ, तापनि म कर्मदेखि अलग रहन सक्दिनँ ।
आकाशको सूर्य, हामी बस्ने धर्ती, हावा, पानी सबैसबै आपैmँमा पूर्ण छन्, तापनि नियमिततः आ–आफ्ना कर्तव्य निर्वाहमा निरन्तर जुटिरहेका छन् । यसको अर्थ देवतादेखि दानवसम्म, मनुष्यदेखि प्रकृतिसम्म सबैसबै कर्म र दायित्वको कर्तव्यबाट पृथक् रहन सक्दैनन् । महान् पुरूषहरुले त झन् कर्म गर्न छोड्नुहुँदैन । भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ ः यदि मैले सावधान भएर कर्मका मर्महरुलाई व्यवहारमा अनुवाद गरिनँ, अथवा मैले कर्म गरिनँ भने मनुष्यहरु पनि मेरै अनुसरण गरेर मजस्तै कर्महीन जीवन बाँच्न सुरू गर्नेछन् । तिम्रो हकमा पनि त्यही हो अर्जुन । त्यसैले, कर्म गर र कर्मयोगीहरुका अनुकरणीय बन ।
‘यदि मैले कर्म गरिनँ भने यी मानिसहरु पनि सबै भ्रष्ट र नष्ट भएर जान्छन् र म पनि ठिमाहा प्रकृतिको समस्त प्रजाजनको हत्यारा बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले, कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरुले जसरी कर्म गर्दछन्, विद्वान्ले पनि आसक्तिरहित भएर कर्म गरोस्’— भगवान् श्रीकृष्णको निर्देशन ।
गीताका अनुसार ज्ञानी पुरूषहरुले कहिल्यै पनि शास्त्रले भनेअनुसार कर्म गर्ने अज्ञानी अर्थात् सामान्य जनताहरुको बुद्धिमा भ्रम उत्पन्न गरेर कर्मप्रति उनीहरुमा अश्रद्धा बढाउने काम गर्नुहुँदैन । यसका बदला शास्त्रले भनेअनुसार कर्म गर्दै उनीहरुलाई पनि त्यस्तै कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ । कर्म गर्ने मान्छेले आपूmलाई ‘म नै कर्ता हुँ ’ भन्ने अन्तस्करणदेखिको अहङ्कार निकालेर फाल्नुपर्दछ, किनकि हामीले गर्ने सम्पूर्ण कर्महरु प्रकृतिको गुण र धर्मले प्रेरित भएर हामीले गरिरहेका हुन्छौँ । जसले ‘म कर्ता हुँ’ भनेर ठान्दछ, ऊ मूर्ख हो ।
सबै मानिसले पढेका र लेखेका हुँदैनन् । त्यस्ता मान्छेले सत्कर्म गरेरै जीवनको अँध्यारो हटाउन सक्दछन् । त्यसैले, ज्ञानी मान्छेले त्यस्ता अनपढ र निरक्षर मानिसलाई कर्मबाट टाढा लैजाने काम गर्नुहुँदैन । प्रकृतिका गुणद्वारा मोहित मनुष्यहरु गुण र कर्ममा आसक्त रहेका हुन्छन् । सम्पूर्ण रुपमा कर्म र ज्ञानको विज्ञान थाहा नपाउने मानिसलाई सबै कुरा जान्ने विद्वान्हरुले कर्मबाट विचलित तुल्याउनुहुँदैन ।
भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ ः हे अर्जुन, त्यसैले तिमी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट । तिमीले गर्ने कर्महरु जे–जस्ता भए पनि तिनको फल मलाई अर्पण गर । तिम्रा राम्रा र नराम्रा सबै फलहरु मैले ग्रहण गर्नेछु र तिमीलाई कर्मफलको बन्धनबाट मुक्त गर्नेछु । ममा तिमीले चित्त लगाऊ, सम्पूर्ण कर्मलाई ममाथि अर्पण गरेर आशा, ममता र सन्तापरहित भएर युद्ध गर ।
‘जसले मेरा बचनमा श्रद्धा व्यक्त गर्दै दोषदृष्टिले रहित भएर मैले भनेबमोजिम कर्म गर्दछन्, ती सबै कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुनेछन् तर मैले भनेका कुरामा दोष देखेर त्यसअनुसार कर्म गर्दैनन्, ती मूर्ख हुन् र ती नष्टप्रायः हुन्छन् भन्ने भगवान् श्रीकृष्णको भनाइ छ । उहाँ भन्नहुन्छ, सबै प्राणी प्रकृतिले भनेअनुसार स्वभावतः कर्म गर्दछन् । ज्ञानवान्ले पनि आफ्नै प्रकृतिअनुसार चेष्टा गर्दछ भने यस्तो कर्ममाथि हठ किन गर्नुछ र ? पत्येक इन्द्रियको विषयमा अथवा केन्द्रमा राग र द्वेष लुकेर बसेको हुन्छ । तर, मनुष्य ती राग र द्वेषको वशमा हुनुहुँदैन, किनकि ती कल्याण र परमार्थको मार्गका बाधा र विघ्न हुन् ।’— भगवान्ले यसरी अर्जुनलाई सिकाउनुभएको छ ।
श्रीकृष्णका अनुसार स्वधर्मको मूल्य निकै उच्च हुन्छ । राम्ररी आचरणमा ल्याए पनि अर्काको धर्मभन्दा कम गुणी भए पनि आफ्नै धर्म उचित हुन्छ, अर्थात् हाम्रै कर्तव्य, कर्म र मूल्यमान्यताहरु श्रेष्ठ हुन्छन् । हामी बरू आफ्नै धर्ममा मर्नु कल्याणकारक हुन्छ, तर अर्काको धर्मले त हामीलाई केवल भय दिन्छ ।
यसैबीच, अर्जुनले प्रश्न गर्दछन्, ‘भगवान्, मान्छेले नचाहँदा नचाहँदै पनि बलात् कसद्वारा प्रेरित भएर पापाचारमा संलग्न हुने गर्दछ ?’ उत्तरमा भगवान् भन्नुहुन्छ ः ‘रजोगुणबाट उत्पन्न भएका अति डरलाग्दा काम र क्रोध अति खन्चुवा छन्, अर्थात् यी न कहिल्यै अघाउँछन्, न कहिल्यै सन्तुष्ट नै हुन्छन् । यी अति पापी पनि छन् । यिनलाई सधैँ वैरी जान । जसरी धूवाँले अग्नि र धूलोले ऐना ढाकिएको हुन्छ, सालको आवरणले गर्भ ढाकिएको हुन्छ, त्यसरी नै कामले हामीभित्रको ज्ञान र विवेकलाई ढाकेको हुन्छ । र, हे अर्जुन, यो आगोजस्तै कहिल्यै पूर्ण नहुने कामरुपी वैरीले ज्ञानीहरुको ज्ञानलाई छोप्ने काम गरेको हुन्छ । हाम्रा इन्द्रियहरु मन र बुद्धि कामका वासस्थान मानिन्छन् । यो कामले मन, बुद्धि र इन्द्रियको सहयोगमा बुद्धिलाई मोहित गरेर जीवात्मालाई मोहित गर्दछ । यसैले, हे अर्जुन, तिमीले पहिले इन्द्रियलाई वशमा गरेर ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने यो पापी कामलाई अवश्य प्रभावहीन र निरस्त तुल्याउने काम गर । इन्द्रियहरुलाई स्थुल शरीरभन्दा श्रेष्ठ, बलवान् र सूक्ष्म मानिन्छ भने यी इन्द्रियदेखि पर मन छ । मनदेखि पर बुद्धि छ भने बुद्धिभन्दा जे पर छ, त्यो आत्मा हो । यसप्रकार, बुद्धिद्वारा पर अर्थात् सूक्ष्म र अत्यन्त श्रेष्ठ आत्मालाई जान, बुझ र बुद्धिका माध्यमले मनलाई वशमा राख्दै कामरुपी दुर्जय शत्रुलाई नाश गर । बस्, यही तिम्रो धर्म हो, कर्म हो र जीवनको सार्थकता पनि ।’
नवलपुरमा चट्याङ्ग लागेर ३ मजदुर घाइते
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीमा चट्याङ्ग लागेर ३ जना मजदुर घाइते भएका छन् ।इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्किबासका अनुसार विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका...